Wasaaradaha Internetka - Wasaaradaha
Wasaaradaha kaniisadaha Masiixa
Waad ku mahadsantihiin booqashada Wasaaradaha ee kaniisadaha Masiixa. Boggan waxaa loo abuuray faa'iidada dhammaan Masiixiyiin iyo kuwa doonaya inay wax badan ka ogaadaan Rabbiga. Haddii aad xiiseyneysid inaad ka qayb qaadato adeegga qaar ka mid ah, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad la xiriirto mid ka mid ah wasaaradahaas wixii macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad wasaaraddaada ku xidhan tahay boggaan email noogu soo dir Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view.. Waxaanu kaliya xiriirin doonaa wasaaradaha kaniisadaha Masiixa. Codsigaaga waxaa la siin doonaa tixgelin dhab ah.
Miiska Dhexe ee kor ku qoran waxaa laga yaabaa inaad riixdo mid ka mid ah xiriirada laga helay "Wasaaradaha" tabaha si loo helo liiska wasaaradaha.
Waa farxad iyo duco u adeegidda kiniisadaha Masiixa iyo dunida internetka oo la wadaagaya warka wanaagsan ee Ciise Masiix. Waxaan rajeyneynaa inaan kuu adeegno. Nimcada Ilaah, jacaylka Ciise, iyo nabadda Ruuxa Quduuska ah ayaa kula jooga adiga iyo qoyskaaga weligiis.
Waan caawin karnaa. Website-yada Website-ga wuxuu sahlanahay in la isticmaalo oo bilaash ahaado in la isticmaalo mid ka mid ah qorsheyaasha martigelinta ee aan bixino. Haddii loo baahdo waxaan naqshadeyn karnaa websaydh xirfad leh kharash yar. Riix halkan ama barta shabakadda ee faahfaahin dheeraad ah.